Ukuze uhlele kahle futhi uhambisane noshintsho kusuka enkulisa kuya esikoleni
Thuthukisa ngaphandle kokuxoshwa - thola ingane yakhojwayele izikweletu ngaphambi kokuqala isikole
Isikhathi sokuqala esikoleni - qiniseka ukuthi unokuphumula okwanele
Lapho uneminyaka eyisithupha ubudala, ukuqala kokubaluleka kokuphila kuqala: izingane zazivame ukuzwa lezi zinkulumo noma imishwana efanayo ezinsukwini zokuqala lapho ukubhaliswa kusondela.
Kusukela enkulisa ukuya esikoleni - ushintsho olubushelelezi luphumelela
Eminyakeni yamuva, i-curricula yesikole samabanga aphansi ishintshile othisha abazinikele njalo futhi abazinikezele manje sebezama ukwenza kube lula izingane ukuba ziqale isikole ngokufaka izinto eziningi ezidlalwayo eklasini futhi kunciphise ngamabomu ukwesaba. Ukubambisana phakathi kwe-kindergarten kanye nesikole samabanga aphansi nakho kwathuthukiswa ezindaweni eziningi.
Noma kunjalo, izingane eziningi zasenkulisa zizwa okungaphezu kwenjabulo uma zicabanga ngendima yazo entsha njengesikole. Phela, lesi sigaba esisha sokuphila siletha izinguquko eziningi ezibalulekile futhi, ngaphezu kwakho konke, sisebenza.
Kanye nabafundisi, njengomzali kufanele uzame ukwenza ushintsho phakathi kwesonto lokufundela nesikole njengomnene ngangokunokwenzeka futhi ukulungiselela ingane yakho kahle ngezinselele ezintsha.
Umehluko omkhulu phakathi kokukhushulwa esikoleni sabahlengikazi kanye nenqubo yokufunda yesikole ukuthi ingane esikoleni ngokuzumayo inemithwalo yemithwalo eminingi. Sekuvele kukwazi ukudlala, ukuhleka nokuhlaziya usuku lonke futhi ngokuzumayo i-45 kufanele ibe efonini imizuzu embalwa ngesikhathi, ihlale igcinwe izincwadi zayo, yenza umsebenzi wesikole futhi ibhale izincwadi ezihlanzekile.
Lokhu kusabisa abantu abaningi abasha. Ngakho-ke, kunengqondo ukuthi izingane zifundele kakade ngaphambi kokubhaliswa kwezikweletu. Lokhu akusho ukuthi abancane kufanele benze noma yikuphi ukubhala noma ukuzivocavoca umzimba nsuku zonke. Kunamanye amathuba.
Ukuqala kwesikole njengesiqalo sokuphila kwesikole
Isibonelo, uma ingane yakho ifuna ukuya esikhwameni sokuzivocavoca noma esikoleni somculo, kufanele kuqala iqhaza esifundweni sesilingo esingenacala. Khona-ke kungase kuthathe isinqumo ngokwayo ukuthi ngabe omunye umhlanganyeli ufanelekile noma cha. Kodwa: Uma ingane yakho isinqume, kufanele ihlale ngaleyo ndlela - ikakhulukazi uma imali yonyaka isivele ikhokhwe.
Ngisho nasekuphileni kwansuku zonke kunezimo emindenini yonke lapho ingane engasenkulisa ikwazi ukuthatha imisebenzi ethile. Isibonelo, unike indodakazi yakho noma indodana yakho ukuthwala udoti, ukuya ebhikawoti, noma ukubeka itafula njalo. Lokhu kuzobulala izinyoni eziningana ngetshe elilodwa, ngoba ingane yakho ingabi nje nomqondo wokuzibophezela kodwa futhi izwa ukuthi ithathwe ngokungathí sina. Ngaphezu kwalokho, ukuzethemba kwakhe kuqiniswa.
Ngaphezu kwalokho, njalo ukhuthaze ingane yakho ukuba icabange, ibuke futhi ilalele. Yini othisha abayitshela mayelana nohambo? Yiziphi izingubo ezidingekayo ekusebenzeni ehlobo lehlobo? Yiziphi izinketho ingane yakho ezibonayo ekuxazululeni izingxabano phakathi kwezinjabulo ezimbili ezinhle kakhulu?
Ngokwenza njalo, ukhuthaze ikhono lokugxila futhi ucabange ngendlela ehlelwe yisisombululo. Lezi zikhono ezimbili zidingwa ngokuphuthumayo ngabafundi, njengoba lokhu kuthuthukisa izinqubo zokufunda kakhulu.
Okunye okubalulekile: Vumela ingane yakho izame kakhulu ngangokunokwenzeka futhi ikhuthaze ukuzimela kwayo. Isibonelo, uma kuziwa esikoleni, kufanele sikwazi ukugqoka yedwa, ukuzihlela ngokwayo, nokunakekela izinto zayo.
Ikakhulukazi amasonto okuqala njengesikole esikhathaza kakhulu abantwana. Akudingeki nje ukuthi ujwayele ukufunda, kufanele futhi uthole indlela yakho eduze nesakhiwo esingaziwa, ujabulele indlela eya esikoleni futhi uthathe indawo yakho emphakathini weklasi. Umsebenzi wesikole usenhla ntambama.
Ukuqala kwesikole kumele kuhambisane nabazali
Ngalesi sikhathi, njengomama noma ubaba, kufanele uqiniseke ukuthi ingane yakho ithole ubuthongo obanele futhi inesikhathi sokuphola emini. V
Zama ukugcina inani lokuqokwa kwamalanga ntambama ngangokunokwenzeka ukuze indodana yakho noma indodakazi yakho ikwazi ukuhlangabezana nabangani noma ukuhlala ekamelweni layo.
Ungabeki ukucindezela ingane yakho uma kunzima ukuhlangabezana nezidingo zemfundo. Abakhiqizi abaningi bokuqala bancintisana omunye nomunye ukuze badumise othisha futhi bazibeke bebecindezele noma kunjalo. Khuthaza ingane yakho ukusiza ngomsebenzi wesikole, kodwa yamukele uma benqaba usizo lwakho.
Okunye okubalulekile: uma ingane yakho yenza amaphutha, ungawaqondisi. Uma kungenjalo, othisha bazokwenza okungalungile izinga lokusebenza lomntanakho, futhi imiphumela izophazamisa ekuhlolweni kokuqala.
Uma uqaphela ukuthi ingane yakho igcwele amandla, bheka ingxoxo nomfundisi weklasi. Abaqashi bokuqala akufanele bachithe okungaphezu kwe-30 emizuzwini ye-40 emsebenzini wabo wesikole.
Ukuvuselela kusuka egumbini lokuphumula
Kungani sithola ukoma endaweni? umbuzo izingane
Ukunakekelwa kwezingane - ukunakekela izinwele ezivela emntwaneni
Ukunakekela izingane - ubuso bomntwana
I-Flag ye-Chad - AmaFlegi kuwo wonke amazwe
I-Flag of the Vatican - Amafulegi kuwo wonke amazwe
Umbala Nessie ukuhlanza Loch Ness